Zimbabwe - latest cricket news, match reports & comment
A brilliant unbeaten 91-run stand between Sikandar Raza and Tendai Chisoro helped Zimbabwe post 218 for eight in their innings following which the spinners troubled West Indies in their chase and had then 124 for five when rain intervened and played spoilsport to ensure a five-run victory to the home side by DLS method in the sixth One-Day International of the tri-series in Bulawayo.
Rain abandons tri-series encounter between Zimbabwe and Sri Lanka
Persistent rain led to the abandonment of the fourth game in the tri-series encounter between Zimbabwe and Sri Lanka in Bulawayo forcing teams to share the points.
After a collective bowling performance from Sri Lanka restricted Zimbabwe to 154, Dhananjaya de Silva led the chase with an unbeaten 78 to ensure an eight-wicket win for the visitors in the first game of the tri-series in Harare.
Carl Mumba's impressive performances in Tests earns him ODI place
Zimbabwe have named two uncapped players - pacer Carl Mumba and top-order batsman Tarisai Musakanda in the 16-men squad for the upcoming home tri-series against Sri Lanka and West Indies.
Rangana Herath completed a 13-wicket haul in the game as Sri Lanka crushed Zimbabwe by 257 runs on day five in the second Test in Harare to complete a 2-0 series whitewash.
Rangana Herath picked yet another 10-wicket haul as Zimbabwe are reeling at 180 for seven in a chase of 491 runs at stumps on day four of the second Test against Sri Lanka in Harare.
Sri Lanka on top despite Mumba's triple strike
After a five-wicket haul from Rangana Herath dismissed Zimbabwe for 272 in their first innings, an unbeaten half-century from Dimuth Karunaratne streched Sri Lanka's lead to 334 with six wickets in hand at stumps on day three of the second Test in Harare.
Chari, Ervine steady Zimbabwe innings after Gunaratne century
After Asela Gunaratne's maiden Test century powered Sri Lanka to 504 in their first innings, unbeaten fifties from Brian Chari and Craig Ervine ensured Zimbabwe reached 126 for two at stumps on day two of the second Test in Harare.
Dhananjaya de Silva, Tharanga rescue Sri Lanka after top order collapse
After Zimbabwe chipped away with early wickets, Upul Tharanga and Dhananjaya de Silva rescued the Sri Lankan innings with their 143-run stand to take the visitors to 290 for five at stumps on day one of the second Test in Harare.
Sri Lanka name inexperienced squad for Zimbabwe tri-series
Sri Lanka have named a relatively inexperienced squad for the One-Day International tri-series in Zimbabwe which is scheduled to begin from 14th November.
West Indies selectors have dropped senior batsman Marlon Samuels and pacer Alzarri Joseph in the One-Day International squad for the tri-series in Zimbabwe this month.
Sri Lanka earn hard fought win after Zimbabwe's resilience
A collective bowling performance from Sri Lanka overcame a strong resistance from the Zimbabwe batsmen as they stretched the game till the final few overs but failed to prevent the visitors from winning the first Test in Harare by 225 runs.
Rain stops Sri Lanka's progress after Karunaratne century
After Dimuth Karunaratne's century and Dhananjaya de Silva's fifty stretched Sri Lanka's lead to 411 runs, rain played spoilsport and washed out 31 overs of play on day four of the first Test against Zimbabwe in Harare.
Graeme Cremer slams maiden Test century as Zimbabwe frustrate Sri Lanka
Graeme Cremer became the first Zimbabwe player to score a century and pick a four-wicket haul in the same innings as Zimbabwe scored 373 in their first innings in response to Sri Lanka's total of 537 at stumps on day three of the first Test in Harare.
Zimbabwe off to solid start after Tharanga century
After century from Upul Tharanga propelled Sri Lanka to 537 in their first innings, Tino Mawoyo and Hamilton Masakadza ensured Zimbabwe reached 88 for one at stumps on day two of the first Test in Harare.
Kusal Perera maiden century highlights Sri Lankan dominance on day one
Riding on a fluent century from Kusal Perera and with support from Kaushal Silva and Dimuth Karunaratne, Sri Lanka went on to post 317 for four at stumps on day one of the first Test against Zimbabwe in Harare.
Zimbabwe call up Carl Mumba, Tarisai Musakanda for Sri Lanka Tests
Zimbabwe have called up uncapped cricketers Carl Mumba and Tarisai Musakanda for the upcoming two-match Test series against Sri Lanka to be played in Harare.
Sri Lanka announce squad for Zimbabwe Test series
Sri Lanka have included uncapped seamer Lahiru Kumara in their 15-man squad that will feature in the two-match Test series in Zimbabwe.